Imbeko - Shineon Technology Co., Ltd.
I-Shineon ikhethwe njenge-herring ebomvu ye-top100 ka-2013
ISANTA MONICA, eCalif.-UMHLA-iRed Hering ibhengeze i-Top 100 yeLizwe ukwamkela iinkampani zabucala ezikhokelayo ezivela eMntla Melika, eYurophu nase-Asia namhlanje, zibhiyozela ezi zinto zintsha kunye neetekhnoloji kumashishini abo.
UShinon wawongwa ngebhaso leshishini lobuchwephesha kuzwelonke.
Ngentsasa yango-Matshi 16th, iNkomfa yoMsebenzi wezoQoqosho kunye neTekhnoloji yeTekhnoloji ye-2019 ibibanjwe yi-Nanchang High-tech Zone Administration kwiholo ye Nanchang 28th yesikolo samabanga aphakamileyo. Le nkomfa ibijolise ekuphononongeni ngokubanzi nasekugqibeni ...
Ngo-2011 ibhaso lehlabathi le-cleantech 100
Ukulungela i-Global Cleantech 100, iinkampani kufuneka zizimele, zenzele inzuzo kwaye zingadweliswa kulo naluphi na utshintsho olukhulu lwesitokhwe. Kulo nyaka, iinkampani ezingama-8,312 ezivela kumazwe angama-80 zonyuliwe, uShineon yenye yazo. Inkqubo yokhetho idibanisa idatha yophando yeCandelo leCleantech kunye nezigwebo ezisemgangathweni ezivela kubatyunjwa ...